संजोग कोइरालासँग दिपाश्रीको नक्कली विवाह « Ramailo छ
संजोग कोइरालासँग दिपाश्रीको नक्कली विवाह
निर्देशक दिपाश्री निरौलाले नायक संजोग कोइरालासँग विवाह गरेकी छिन् । एक तीज गीतको भिडियोमा दिपा र संजोगको विवाहको दृश्य खिचिएको हो । मंगलबार बत्तीसपुतलीको राम मन्दिरमा तीज गीतको छायाँकन गरियो । ‘बहिनीको भिनाजु’ बोलको गीतमा शोभा थापाको स्वर, प्रशान्त पौडेलको लय तथा शब्द रहेको छ ।
नायिका बर्षा राउतका प्रेमी संजोग कोइरालासँग नक्कली विवाह गरेकी दिपाको सक्कली विवाह चाहिं कहिले होला त ? ‘होला नि एक दिन’ दिपाले हाँस्दै भनिन्, ‘साउनको व्रत यसपाली पनि लिएको छु अब त पक्कै बिहे हुन्छ होला ।’ दिपालाई विवाह गर्ने पुरुष चाहिं कस्तो हुनुपर्छ होला त ?
‘गोजीमा गाँठ भाको नभएपनि मनमा आँट भएको चाहिं हुनुपर्छ’, कोमल ओलीको गीतलाई मिलाउँदै दिपाले ठट्यौली गरिन् । नायक कोइराला भने बर्षासँग चाँडै नै विवाह गर्ने योजनामा छन् ।